Hotel Projects International - Armati Hotel Project EYurophu
Armati Hotel Project EYurophu
NgoLwesibini, Juni 23, 2015 12: 31: 02 AM America / Los_Angeles
Omnye Armati 5 uqalise iprojekthi Ihotele eYurophu, bamkelekile ukuba atyelele kule hotele ukubona kwetephu yethu.
Armati 413 series kwetephu catalouge nceda khangela zilandelayo:
Kunye kuhola Florence-Siena, omnye nezimanga, ukuba izakhiwo ezintsha kufunyanwe, ukuba sifumana kwilali Bargino (kufuphi San Casciano Val di Pesa), ingaba yintoni na.
Yinto winary le Antinori omtsha, sisiphumo projekthi yebhongo wayefuna ngamandla Family Antinori, ngubani uvelisa iwayini nasezizukulwaneni 26 kwaye, emva kweenkulungwane ezintlanu, enambuzelayo ikomkhulu lawo ezisuka embindini Florence ukuba intliziyo "iChianti Classico" .Le efihlakeleyo yaba wakha bemba endulini ke egubungele isakhiwo kunye emhlabeni.
Iprojekthi ye iwayini entsha (ukuba li hlonela gqitha bume Tuscan kwaye mhlaba) iyodwa kuba idibanisa ezintsha ngokwesiyilo zobugcisa zale mihla neyokwenza iwayini kunye isithethe yosapho Antinori yakhe.
Kule hotele opend ngoFebruwari 2013.
projekthi lokuhlambela Ihotele eYurophu
Ihotele lokuhlambela projekthi kwetephu